Dad Rabay in ay abuuran Colaad Oo Gacanta Ku Dhigay Laamaha Amniga - Awdinle Online
Dad Rabay in ay abuuran Colaad Oo Gacanta Ku Dhigay Laamaha Amniga
April 18, 2020 (Awdinle Online) –Ciidamo ka tirsan kuwa Xoogga dalka ee Guutada 15aad ee ka howlgala Galmudug ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgal qorsheysan ka sameeyay duleedka Degmada Balanbale ee Gobolka Galgaduud iyo deegaano kale oo hostaga degmadaas.
Howlgalka Ciidamada Xoogga ayaa inta uu socday waxaa lagu soo qabtay dad lagu eedeeyay inay duugis ku sameeyeen Baraago ay dadka Biyaha ka cabaan iyo guryo la dumiyey.
Taliska Ciidamada Guutada 15aad ayaa sheegay in dadka deegaanka Balanbale ay uga timid cabasho ku aadan dhanka amniga, taasi oo ay ku hayeen dad hubeysan oo duugis ku sameeyay Baraago biyo laga cabo, isla markaana ay Ciidamada Jawaab ka bixiyeen arrintaas.
“Iyadoo Laga Jawaabayo Fariimo bulsho oo laxariira Adkeynta Amniga Aaga kusuntan inaan hub lagu qaadan karin cabir fogaantiisuna tahay 18km oo Jiha Kasta uga baxsan degmada balanbal ayaa si loo fuliyo waxaa howlgal aagaas ka sameeyey Ciidamada Guutada 15aad waxaana howlgalkaas lagu soo qabtay dad lagu soo eedeeyey inay ka danbeeyeen duugis lagu sameeyey baaraago iyo guryo la dumiyey” ayaa lagu yiri War qoraal ah oo kasoo baxay Taliska Ciidanka Guutada 15aad ee Galmudug.
Ugu dambeyntii Saraakiisha hogaaminaysa Ciidamada howlgal sameeyay ayaa u digay dadka ku dhaqaan deegaanadaas inay ku kacaan falal amni darro, iyagoo ugu baaqay in nabada laga wada shaqeyo.
Si kastaba duleedka Balanbale iyo deegaano hoostaga ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay dagaal beeleed geystay khasaaro isugu jira dhimashom iyo dhaawac, kuwaasi oo salka ku haayay dilal la xiriira Aanooyin qabiil iyo Ceel biyoodyo.
Previous articleCaabuqa Faafa ee Corona Virus Iyo Wararkii Ugu dambeeyay
Next articleAxmed Madoobe oo raadinaya qorshe kale oo aan ahayn dagaal si uu ula heshiiyo mucaaradkiisa